मध्यरातमा चितवन पुर्‍याइए रवि लामिछाने, के भन्छ प्रहरी ?
काठमाडौं, ३१ साउन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणको छानबिनका लागि पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीनजनालाई प्रहरीले चितवन पुर्‍याएको छ ।
विहीबार साँझ काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएका तीनैजनालाई शुक्रबार बिहान साढे एक बजे चितवन पुर्‍याइएको हो । लामिछानेसहित युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई कडा सुरक्षा दिँदै चितवन लगिएको र प्रहरी कार्यालय लैजानुअघि भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।
पक्राउ परेका तीनैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरुलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले पुडासैनी ‘आत्महत्या’मा कारक रहेको आरोप उनीहरुमाथि लगाएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिता- २०७४ को दफा १८५ मा भनिएको छ-
आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुनेः
(१) कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
जिप्रका चितवनले तीनैजनालाई पुडासैनीको ‘डाइङ डिक्लेरेसन’ का आधारमा पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
जिप्रका चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले ‘आत्महत्या’ अघि मोबाइलमा रेकर्ड पुडासैनीको बयानलाई प्रहरीले ‘डाइङ डिक्लेरेसन’ मानेको बताए ।
मल्ल भन्छन्, ‘मर्नुअघिको बयानलाई सत्य मानिने कानुनी आधार छ । यसलाई ‘डाइङ डिक्लेरेसन’ भनिन्छ । मृतकको मोबाइलमा रेकर्ड गरिएको भिडियो भेटियो । हामीले ल्याबमा टेस्ट गर्‍यौँ । भ्वाइस पनि परीक्षण गर्‍यौँ, यी सबै परीक्षणबाट भेटिएका भिडियो मृतकको नै भएको प्रमाणित भयो । जसमा लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई पोलिएको छ । यसबाहेकका पनि प्रमाण हामीसँग छन् । यी आधारले तीनैजनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाउँछ । त्यसैले पक्राउ गरिएको हो ।’
नुवाकोट बेलकोटगढी–३ स्थायी घर भएका २७ वर्षीय पुडासैनीको शव गत २० साउनमा चितवन भरतपुरको पोखरा बसपार्कस्थित होटल कंगारुको कोठा नं. २०२ मा झुन्डिएको अवस्था भेटिएको थियो । प्रहरीले घटनास्थलबाट मोबाइलसहितका सामग्री बरामद गर्दा मोबाइलमा भेटिएको भिडियो शंकास्पद लागेपछि परीक्षण गर्न काठमाडौंस्थित प्रहरीको प्रयोगशाला पठाएको थियो ।
एसपी मल्लले अगाडि थपे, ‘पुडासैनीको मोबाइलमा केही शंकास्पद भिडियो भेटियो । त्यसको ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि हामीले काठमाडौस्थित ल्याबमा डिजिटल फरेन्सिक टेस्ट गर्न पठायौँ । रिपोर्ट आउन केही ढिलो भयो । त्यसो हुँदा पक्राउ गर्न ढिला हुन पुग्यो ।’